Book – Page4– Muslim Book
Mohamed Rahin | March 12, 2020
ဇကာသ် အကြောင်းသိကောင်းစရာများ…… ဇကာသ် ဇကာသ် ဟူသည် မိမိတွင်ရှိသောပစ္စည်းဥစ္စာများအနက်မှရှရီအသ်တရားတော်က သတ်မှတ် ထားသောအစိတ်အပိုင်းကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အမိန့်ပညာတ်တော်အတိုင်း ဆင်းရဲသား များအားအပိုင်ပေးအပ်လှုဒါန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဆွလာသ်နှင့်ရိုဇာသည် ကိုယ်ကာယအားဖြင့် လုပ်ကိုင်ရသောအိဗါဒသ်ဖြစ်ပြီး ဇကာသ်သည်ဥစ္စာပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်အပ်သော အိဗါဒသ်ဖြစ် သည်။ဇကာသ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်( ၂း၂၇၇၊ ၆း၁၄၁၊ ၉း၅၊ ၄၁း၇၊ ၇၀း၂၄-၂၅၊ ၇၃း၂၀၊၉၈း၅) တွင်လာရှိပါသည်။ ဇကာသ်ပေးခြင်းသည်အစ္စလာမ်မဏ္ဍိုင်ကြီး၅ခုတွင်တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပြီးနိဆာဗ် ရှိသူတို့အဖို့ မဖြစ်မနေလုပ်ရမည်
Mohamed Rahin | March 10, 2020
သုံးမိနစ်အတွင်းမှာ သုံးနာရီရဲ့အိပ်စက်ခြင်း…… ဟဇရသ်မုရ်ရှိဒ် အာလမ် (ရဟ)သခင်ကအမိန့်ရှိသည်မှာ တစ်ကြိမ်သောအခါမှာကျွန်ုပ်ဟာ ရက်ပေါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်နေရင်းအလွန်ပဲ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတယ်။ မဂ်ရိဗ်နမာဇ်အချိန်ကလည်းနီးကပ်လာပြီ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှူုကြောင့် ကျွန်ုပ်ဟာမတတ်စွမ်းနိူင်ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်က မိမိရဲ့အဖော်တွေကိုပြောတယ်။အသင်တို့အားလုံး ဒီကနေ သွားလိုက်ပါ။ အဖော်တွေက ပြန်ပြောတယ်။ ဟဇရသ်။ နမာဇ်ဖတ်ဖို့ 10မိနစ်/15မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်။ နမာဇ်ပြီးမှ အိပ်ပါ ကျွန်ုပ်ကပြန်ပြောသည်မှာအသင်တို့သွားလိုက်ပါ အားလုံးကိုအခန်းအပြင်ကို ထွက်ခိုင်းလိုက်ပြီး တံခါးပိတ်လိုက်တယ်။ပြီးနောက်အိပ်ယာပေါ်လာ၍အိပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်အိပ်ရင်းအိပ်ရင်းနဲ့အိပ်ရေးဝသွားတယ်။
“ဗိစ္စမိလ္လာဟ်ဟေ့ ရဟ်မားနိလ် ရဟီးမ်” ဖတ်ရွတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး…..
“ဗိစ္စမိလ္လာဟ်ဟေ့ ရဟ်မားနိလ် ရဟီးမ်” ဖတ်ရွတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး….. မည်သူမဆို ဖြေရှင်း၍ မရသော အခက်အခဲဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နေရသည်ရှိသော် ၎င်းအနေဖြင့် ဝိုသွူရေ သန့်စင်၍ (‎بسم الله الرحمن الرحيم) ‎”ဗိစ္စမိလ္လာဟ်ဟေ့ ရဟ်မားနိလ် ရဟီးမ်” ကို (၇၈၆)ကြိမ် (၇)ရက်တိုင်တိုင် ဖတ်ရွတ်မည်ဆိုလျှင် အင်ရှာအလ္လာဟ် အခက်အခဲ အားလုံး
Mohamed Rahin | March 9, 2020
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် တာဝန်ယူသူငါးဦး……. ငါးဦးသောသူဟာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သခင်ရဲ့ တာဝန်ယူမှုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ ဟဇရသ်မုအာဇ်ဗင်န်ဂျဗလ်သခင်တင်ပြတယ် တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သခင် အမိန့်ရှိတာကို ကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ (၁)အကြင်သူဟာ အလ္လာဟ့်လမ်းမှာထွက်နေတယ်ဆိုရင် ထိုသူဟာ အလ္လာဟ်ရဲ့တာဝန်ယူမှုအောက်မှာရှိပါတယ်။ (၂)အကြင်သူဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်နားမကျန်းဖြစ်နေတာကို သွားရောက်မေးမြန်းကြည့်ရှုဖို့သွားတယ်ဆိုရင် ထိုသူဟာလဲ အလ္လာဟ်ရဲ့တာဝန်ယူမှုအောက်မှာရှိပါတယ်။ (၃)အကြင်သူဟာ မနက်(သို့)ညနေကိုဗလီသွားတယ်ဆိုရင် ထိုသူဟာလဲ အလ္လာဟ်ရဲ့တာဝန်ယူမှုအောက်မှာရှိပါတယ်။ (၄)အကြင်သူဟာ အကူအညီပေးဖို့အတွက် ခေါင်းဆောင်ထံကိုသွားတယ်ဆိုရင် ထိုသူဟာလဲ အလ္လာဟ်ရဲ့တာဝန်ယူမှုအောက်မှာရှိပါတယ်။ (၅)တစ်ချို့ကတော့
Mohamed Rahin | March 8, 2020
ဆူးလေကုန်းရွာက ဘွဲ့စနသ်ပေးအခမ်းနား…… ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ဆူးလေကုန်းရွာက မအာရေဖုလ်အိုလူးမ်အာရဗီအထက်တန်း(တိုက်ကျောင်း) မှဘွဲ့စနသ်ပေးအခမ်းအနားပာ။ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ဆူးလေကုန်းရွာက မအာရေဖုလ်အိုလူးမ်အာရဗီအထက်တန်း(တိုက်ကျောင်း) မှဘွဲ့စနသ်ပေးအခမ်းအနားပာ။ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ဆူးလေကုန်းရွာက မအာရေဖုလ်အိုလူးမ်အာရဗီအထက်တန်း(တိုက်ကျောင်း) မှဘွဲ့စနသ်ပေးအခမ်းအနားပာ။ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ဆူးလေကုန်းရွာက မအာရေဖုလ်အိုလူးမ်အာရဗီအထက်တန်း(တိုက်ကျောင်း) မှဘွဲ့စနသ်ပေးအခမ်းအနားပာ။
တောင်းဆုဒိုအာတိုင်း မပြည့်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း…. အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည် တောင်းဆုဒိုအာပြုခြင်းကို အလွန်နစ်သက်ကြောင်း တောင်းဆုဒိုအာ တောင်းခံခြင်းကို လိုလားကြောင်း ဆိုတဲ့ ဟဒီးဆ်တော်တွေမှာလာရှိပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည်အလွန်တရာ သနားဂရုဏာကြီးသောအရှင်အလွန်တရာပေးကမ်းရက်ရောတော်မူတော်အရှင် ဖြစ်လို့ပါပဲ။ တောင်းဆုဒိုအာနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး အတိုချုံးပြောရရင် အချို့သော ညီနောင်များသည် တောင်းဆုဒိုအာကိုမေ့လျော့ ပေါ့ပျက်ကြလေသည်။ ငါ ရဲ့ ဒိုအာကို အလ္လာဟ်ရှင်လက်မခံဘူး။ငါရဲ့ ဒိုအာကို အလ္လာဟ်ရှင် မဖြည့်စည်းဘူး။အဲ့လိုအတွေးတွေကြောင့်
Mohamed Rahin | March 6, 2020
ကိုယ်တော်မြတ်ﷺကိုသတိရလွမ်းဆွတ်နေခြင်းကပင် အိဗာဒသ်ဝတ်ပြုသကဲ့သို့အကျိုးစဝါဗ်ရ…. صلی اللّٰہ علیہ وسلم ကိုယ်တော်မြတ်ﷺကိုသတိရလွမ်းဆွတ်နေခြင်းကပင်အေဗာဒသ်ဝတ်ပြုသကဲ့သို့အကျိုးစဝါဗ်တွေ ရနေစေတယ်။ ကိုယ်တော်မြတ်ﷺကိုသတိရလွမ်းဆွတ်နေခြင်းကပင်အေဗာဒသ်ဝတ်ပြုသကဲ့သို့အကျိုးစဝါဗ်တွေ ရနေစေတယ်။ ကိုယ်တော်မြတ်ﷺကိုသတိရလွမ်းဆွတ်နေခြင်းကပင်အေဗာဒသ်ဝတ်ပြုသကဲ့သို့အကျိုးစဝါဗ်တွေ ရနေစေတယ်။ Credit,ပန်းသခင်
တကယ်ပြည့်တဲ့ ဒိုအာပာ… တကယ်ပြည့်တဲ့ ဒိုအာပာ။လက်တွေ့လက်နာကျင့်သုံးကြည့်ပာ။ ဖတ်ရှု့ပြိးမျှဝေပေးပာ။ တကယ်ပြည့်တဲ့ ဒိုအာပာ။လက်တွေ့လက်နာကျင့်သုံးကြည့်ပာ။ ဖတ်ရှု့ပြိးမျှဝေပေးပာ။ တကယ်ပြည့်တဲ့ ဒိုအာပာ။လက်တွေ့လက်နာကျင့်သုံးကြည့်ပာ။ ဖတ်ရှု့ပြိးမျှဝေပေးပာ။ UNICODE တကယျပွညျ့တဲ့ ဒိုအာပာ… တကယျပွညျ့တဲ့ ဒိုအာပာ။လကျတှလေ့ကျနာကငျြ့သုံးကွညျ့ပာ။ ဖတျရှု့ပွိးမြှဝပေေးပာ။ တကယျပွညျ့တဲ့ ဒိုအာပာ။လကျတှလေ့ကျနာကငျြ့သုံးကွညျ့ပာ။ ဖတျရှု့ပွိးမြှဝပေေးပာ။ တကယျပွညျ့တဲ့ ဒိုအာပာ။လကျတှလေ့ကျနာကငျြ့သုံးကွညျ့ပာ။ ဖတျရှု့ပွိးမြှဝပေေးပာ။
ရိုသေမှု ရှိသူ ဟာ နံဖူးစာကောင်းသူ ရိုသေမှု မရှိသူဟာ နံဖူးစာဆိုးသူ…
ရိုသေမှု ရှိသူ ဟာ နံဖူးစာကောင်းသူ ရိုသေမှု မရှိသူဟာ နံဖူးစာဆိုးသူ… با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ရိုသေမှု ရှိသူ ဟာ နံဖူးစာကောင်းသူ ရိုသေမှု မရှိသူဟာ နံဖူးစာဆိုးသူ 18မိနစ် မွဖ်သီအာဒမ် (ဒါမသ်ဗရ်ကာသုဟွမ်မွလ်အာလီယဟ်) با ادب با
ဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့နဗီလဲ ဖတ်ကြည့်ကြည့်ပာ…. တစ်နေ့ဟဇရသ် အာအေရှာဟ်သခင်မက တမန်တော်မြတ်(ဆွ)ကိုမေးတယ်။အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကေယာမသ်နေ့ရောက်ရင် ကျွန်တော်မျိုးမ အာအေရှာဟ် ဟာကိုယ်တော် မြတ်ကို ဘယ်နေရာမှာ လိုက်ရှာရမလဲ။ တမန်တော်မြတ်ကြီးက အမိန့်ရှိတယ်။ငါ့ကို နေရာ(၃)နေရာမှာလိုက်ရှာပါ။(၁)ငါ့အွမ္မသ်တွေရဲ့ အအ်မာလ်နာမာလ် ချိန်တွယ်တဲ့နေရာမှာရှာပါ။ငါတမန်တော်မြတ်ဟာငါ့အွမ္မသ်သားတွေကောင်းမှု့ဘက်ကချိန်ခွင်သာသွားအောင် ငါကိုယ်တော် အလ္လာဟ်ဆီမှာ ဒိုအာတောင်းနေမယ်။ (၂)ငါ့အွမ္မသ်သားတွေကေယာမသ်နေ့ရေငတ်မွတ်နေတဲ့အချိန်မှာ ငါကိုယ်တော်တိုက်ကျွေးဖို့အတွက် ကောင်စရ် ရေကန်မှာ ငါ့ကိုရှာပါ။ ငါ့လက်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေတွေခပ်ခပ်ပြီးတော့ ငါကိုယ်တိုင်